သုံးသပ်ချက်များ Goji Cream, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သုံးသပ်ချက်များ Goji Cream
ကွင်းဆက်, 22 နှစ်များ, Papuna
ဂရိတ်မုန့်၎င်းသည်၎င်း၏တာ ၀ န်ကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ငါ goji မုန့်ကိုပုံမှန်မနက်နဲ့ညနေမှာလတစ်လကျော်ပုံမှန်သုံးနေတယ်။ငါလျှောက်လွှာနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်! မျက်လုံးအောက်ရှိမျက်နှာနီရဲခြင်း၊အလုပ်မှာရော၊ အိမ်မှာပါ၊ ငါကဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသတိပြုမိလာပြီးပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်။မကြာသေးမီကငါမုန့်ထပ်ခါတလဲလဲအမိန့်ကိုငါပေးပို့ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
ပန္ခ်ဳပ္ေ, 35 နှစ်များ, ရန်ကုန်
သုံးထားသောငွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။အဆိုပါမုန့်လျှောက်ထားရန်လွယ်ကူသည်နှင့်လျင်မြန်စွာစုပ်ယူ။ပထမဆုံးလျှောက်လွှာတင်ပြီးနောက်အရေပြားပြန်လည်ရှင်သန်လာပုံရသည်။ငါခြောက်လကျော်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။goji cream မသုံးမီနှင့်ပြီးနောက်နှိုင်းယှဉ်လိုက်သည်ကမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။မျက်လုံးများနှင့်ပါးများပေါ်တွင်ယခင်ဖော်ပြသောအရေးအကြောင်းများမရှိချေ။လည်ပင်းနှင့်décolletéသည်ပိုမိုတက်ကြွပြီးနုပျိုသည်။
ကွင်းဆက်, 26 နှစ်များ, Dau
နက်ရှိုင်းသောအရေးအကြောင်းများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်မိတ်ကပ်အတွက်သဘာဝအခြေခံအဖြစ် Chose Goji Cream သည်။ငါရွေးချယ်ရာတွင်မှားမဟုတ်ခဲ့ပေ။အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း၊ အသားအရေဖြူထွက်ခြင်း၊ငါနေ့တိုင်းမုန့်ကိုအသုံးပြုသည်။လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ငါ့နဖူးပေါ်တွင်မျက်နှာအရေးအကြောင်းများပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ငါရလဒ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
ပန္ခ်ဳပ္ေ, 24 နှစ်များ, Kotong
ငါ Goji Cream တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ anti-wrinkle cream ကိုကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။လျင်မြန်စွာနှင့်ကောင်းစွာ Absorbs ။အရေပြားအဆီပြန်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာမခြောက်သွေ့ပါဘူး။အဆိုပါမုန့်, ​​အစိုဓာတ်ကိုတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အရေးအကြောင်းတွေ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။လျှောက်လွှာတင်ပြီးနောက်တင်းကျပ်မှုမရှိပါ။သာယာသောအနံ့။အကြံပြု!
လိင္, 34 နှစ်များ, ရန်ကုန်
အလှကုန်ပညာရှင်တစ် ဦး ၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် Goji Cream ကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်မိသည်။အသုံးပြုမှုစိတ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ဆန့်ကျင်တွင်, ကအားလုံးမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်။ယခင်ကသင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကိရိယာမျိုးစုံအသုံးပြုခဲ့ရသည်။Goji Cream သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပေးသည် - မျက်စိပုံသဏ္careာန်စောင့်ရှောက်မှု၊ မိတ်ကပ်အခြေစိုက်စခန်း၊ နံနက်ယံအစိုဓာတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည့်ညနေခင်းမျက်နှာအရေပြား။
အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Goji Cream